PEDILANTHUS: QAABABKA DARYEELKA GURIGA, NOOCYADA DHIRTA IYO SAWIRRADA - SOOSAARKA DALAGGA
Dhawaan, waxay noqotay mid caan ku ah qolalka qurxinta leh ubaxyo aan caadi ahayn. Dhirta waxay abuuraan raaxo gaar ah oo guriga ka mid ah, oo ay weheliyaan gudaha gudaha, iyo nadiifinta hawada.
Xafiisyada waxay ku dhajinayaan jawiga caadiga ah ee caadiga ah iyadoo leh qayb ka mid ah dabeecada, esteemiska. Waxaa ka mid ah dhirta kala duwan, dareenka gaarka ah wuxuu jecel yahay Pedilanthus Perennial.
Maqaalka hoose wuxuu qeexayaa warshadda gudaha. Pedilanthus ubax, noocyada caanka ah ee ay caan ku yihiin waa titicoid, kuwo waaweyn iyo kuwo kale, iyo sidoo kale daryeelka guriga ee suudaan iyo sawir.
Pedilanthus - xiiso leh, aan caadi ahayn, warshad qalaad oo caan ah oo caan ku ah bannaanka u badan.
Waxay leedahay sifo qurxin sare ah, sidaa daraadeed waxay noqon doontaa in lagu daro gudaha casriga casriga ah ama meel xafiis. A ubax dilka ah, sidaas oo leh daryeel habboon wakhti dheer ah waxay koraan iyo aad ku faraxsan tahay iyada quruxdiisa.
Pedilanthus dhul-beereedku waa mid hooseeyatropical Dhulalka Maraykanka, iyo sidoo kale meelaha qaar ee Mexico.
Deegaan dabiici ah, waxay u egtahay dhaadheer, geedo badan oo kor u dhaafaya ilaa 2 mitir. Dhaqanka guriga wuxuu leeyahay cabbir ka badan oo isku dhafan iyo caleemo.
Pedilanthus wakiil ka ah geedo qurxoon oo qoyanoo ka tirsan qoyska euphorbia (Euphorbiaceae).
Magaca Giriigga wuxuu ka yimid ereyada kabaha ("pedilon") iyo ubax "anthos".
Leaves waa cagaar iftiin (madow ama iftiin), daloolin. Waxay noqon kartaa mid joogto ah ama gaaban, beddelaad, ilaa 8-10 cm dheer, siman ama yar yar.
Geedka ayaa ah cylindrical, grayish ama cagaaran midab.
Ubax waxaa lagu sameeyaa inflorescences cufan cufan leh laba cas, yar yar, calaamad u cagaha., qiyaastii 2 cm dhexroor. Inflorescences waa casaan ama casaan. Waxay u eg yihiin madaxyada shimbiraha yar yar ama kabaha.
Dabeecadda, waxaa jira 15 nooc oo kala duwan. Dhaqanka qolka ugu badan waa:
Pedilanthus weyn-fruited (macrocarpus benth.).
Suugaan baadiyaha ah baadiyaha ah caleemo aan daaqin. Caleemaha waxaa la yareeyay qaabka jajabka. Hooyo - Sonora. Waxay soo koobtay, caws-cagaar cagaaran oo kaydiya biyaha wakhtiyo qallalan.
Qayb ka mid ah afkoda ayaa u beddeli kara aragti xejisan. Ubucyada caleenta, casaan ama casaan.
Pedilithus titimaloid (tithymaloides (L.) Poit.).
Dadka waxaa badanaa loogu yeeraa "dabayli Ibliis ah" waayo muuqaal aan caadi aheyn oo astaan ​​ah, taas oo bedesho jihada marka caleemaha cusubi soo muuqdaan. Wuxuu koraa 60-80 cm.
Waa jeexan, geedo dhagaxan leh. oo leh cufan saafi ah, dabeecad, caleemo cufan oo caleemo leh oo ku kala duwan midabka: cagaar leh cad, oo leh geesaha creamy, hambaha casaanka.
Midabka wuxuu ku xiran yahay shuruudaha lahaanshaha. Inflorescences Red. Goobaha ssp. dhar. Ciriiri badan oo cufan, midabka zigzag.
Pedilanthus Fink (finka Boiss.).
Waxaa la dhisay iftiin, cagaar, caleemo waaweyn. Stems zigzag, erey adag. Guryaha, caadi ahaan kaymaha roobabka kulaylaha ee Maraykanka. Waxay diyaarisaa ciidda iftiinka ah, neefta biyaha ah.
Spriczovy pedicanthus (dhejiska Schltdl.).
Aragtida geedaha ee caadiga ah. Xidid aad u sarreeya oo aad u sarreeya ilaa saddex mitir oo dherer ah. Xingmuhu waa cagaar, mugdi, branching. Caleemaha waa qallafsan yihiin, calaamad u ah, geeso jilicsan, ilaa 5-6 cm dheer.
Xaaladaha cimilada qaboobaha, waxay tuuri karaan caleemaha qaarkood. Isla taasi waxay ku dhacdaa dayactir guriga ku haboon.
Pedilanthus oo dalbanaya daryeel, taxadar iyo daryeel.
Isla mar ahaantaana, isaga oo daryeelaya guriga ma aha mid aad u adag oo xitaa bilawga ayaa awoodi doona inuu la qabsado shaqadan.
Dad badan beeralayda ubax ma bixinayaan taxadar ku filan daryeelka ka dib iibka, ka dib taas oo waxay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan.
Bilowga hore, pedilanthus waa in loo wareejiyaa weel kale.
Dukaanka ubaxa ee pedilanthus waxaa lagu kaydiyaa dheriyo ku meel gaar ah, taas oo loo isticmaalo xad-dhaafka.
Ma aha kuwo ku habboon dayactir joogto ah.
Dhulku waa inuu noqdaa mid dabacsan, nafaqo leh, si loo hubiyo socodka hawada ku habboon iyo qoyaanka nidaamka xididka. Biyaha ma aha inay istaagaan si aanay u kicin horumarinta kalluunka.
Xulashada ugu wanaagsani waa in la iibsado walxo diyaar ah oo loogu talagalay suugulenta iyo cacti.
Waxaa suurtagal ah in lagu diyaariyo isku dar ah ciidda si madaxbannaan oo ka soo baxa hadhuudh iyo dhul caleen ah oo isku mid ah, jajabyo leben, ciid.
Awoodda waxaa lagu hagaajinayaa xajmiga nidaamka xididka. ama waxoogaa yar oo ka badan. Ubaxa wuxuu leeyahay xididada yaryar. Waxaa fiican inaad doorato dhoobada dhoobada. Qalabkani waa mid u fiican deegaanka.
Weelka waa inuu ahaadaa god leh dhinaca hoose. Qeybta hoose ee daruuriga ah ee qasabka ah.
Transplanting waa in lagu sameeyaa guga diiran. ka dib muuqaalka caleemaha yar yar. Ka reeban - bedelka isla markiiba iibsashada. Uma baahnid inaad si joogta ah isu bedesho. Waxaa la fuliyaa marka xididdadu bilaabaan inay buuxiyaan mugga buuxa ee dheriga.
Ka dib markii loo beddelo pedilanthus bedelka ayaa lagu talinayaa in la dhigo meel gudcur leh. Tani waxay gacan ka
Xilliga xagaaga iyo gu'ga, ubaxa waxaa la bacrimiyaa 1 mar 30 maalmood. Waxaa fiican inaad isticmaasho dhar gaar ah oo loogu talagalay suugulenta iyo cacti. Inta lagu guda jiro inta kale lama siin karo.
Bacriminta waa in ay ahaadaan xoriyad la'aan. Aad ayay u xun tahay caafimaadka geedka.
Waxay si fiican u koraan qolal nadiif ah oo leh daaqado furan.
Warshadu waxay kuugu fiicnaan doontaa daaqadaha daaqadaha ee daaqadaha u jeedda koonfur-bari, koonfur-galbeed, iyo dhinacyada bariga.
Haddii dhererku uu ku yaal dhinaca koonfureed, waxaad daryeeshaa sameynta nalalka iftiinka. Qorraxda tooska ah waxay khatar u tahay ubax waxayna keeni kartaa gubasho.
Late dayrta iyo jiilaalka sababta oo ah la'aanta qoraxda iftiin macquul ah oo la soo jeediyey.
Qolku waa inuu ahaadaa heerkulka dhexdhexaadka ah: xagaaga oo ah qiyaastii 20-24 digrii, iyo xilliga jiilaalka kama badna 14-16.
Air badanaa xagaaga, qaado dheriga hawada u furan, si ay u neefsato oo u diiriso qorraxda.
Ka ilaali qorshayaasha jiilaalka iyo heerkul aad u yar.
Pedilanthus ma jecla heerkulka qolka sare iyo hawada qallalan.. Waxay ku dhici kartaa jirro, caleenta wuxuu bilaabmaa inuu hoos u dhaco, iyo asliga ah si ay u soo taagaan.
In guga iyo summer pedilanthus u baahan tahay badanlaakiin aan ahayn waraabin joogto ah.
Carrabku waa inuu gebi ahaan qalalan yahay ka hor qoyaanka soo socda. Xilliga jiilaalka, dhirta waxaa la yareeyaa dhif ah (qiyaastii 1-1,5 toddobaad kasta).
Maqnaanshaha qoyaanka waxaa laga yaabaa inay tilmaamaan caleemo saarid ama dillaac.
Wixii waraabinta, biyaha qoyan oo keliya ayaa biyo kulul heerkulka qolka ku habboon.
Xilliga hawada kulul, waraabinta waa in la kordhiyaa.
Warshadku si fiican ayaa loogu habeeyey si loogu ilaaliyo guryaha. Hawadu waa inay ahaato mid qalalan oo dhexdhexaad ah..
Xilliga xagaaga, waxaa lagu talinayaa in biyaha la buufiyo loo isticmaalo sida loo yaqaan 'prophylaxis' oo loogu talagalay hoos u dhigista iyo jaalaha ah ee caleenta.
Xilliga qaboobaha, ha dhigin dhererka qalabka kulaylka..
Qaar ka mid ah beeralayda ayaa dhererka ku dhejinaya weel qoyan leh ama ku rid weel biyo ku xigta qoyaan dheeraad ah (haddii loo baahdo).
Sidee guriga ugu dhalataa? Pedilanthus si fudud u faafin by gooyn.
Si aan u badnayn, sababtoo ah shaqadan ayaa dhib badan, waxay u baahan tahay waqti badan iyo dadaal.
Ku dhejinta by gooyn ayaa lagu talinayaa in la fuliyo sida soo socota: dushooda caleemaha (8 cm dhererka) ayaa la gooyaa pedilantus oo la qalajiyey heerkulka qolka 1-2 maalmood.
Kordhi ciid qallalan heerkulka 22-24 digrii. Ka hor inta beerto, gooyn ayaa lagu kululeeyo ciid. Ku dhaji dheriga dhalada oo aan loo baahnayn, si aanay u kicin muuqaalka kalluunka.
Waxaa lagu rujin karaa biyo qandac ahiyadoo si joogto ah u beddelaysa mid cusub.
Ka dib markii gooyn xidid ah waxaa lagu beeray meel cusub.
Bloom Pedilanthus dhacdaa dhamaadka dayrta iyo bilowga jiilaalka.
Inta lagu jiro muddadan, waxaa lagu talinayaa in la kordhiyo inta jeer ee waraabka iyo in aanad beddelin goobta dheriga.
Pedilanthus uma baahna manjooyin joogto ah iyada oo kobcin wanaagsan iyo horumar.
Qaar ka mid ah beeralayda ayaa ka fujiyaan dhirta ka dib markii ay ku tallaalaan si ay u kordhiyaan laangub.
Saddex meelood laanta laanta ayaa la jaraa, ka dibna lagu daaweeyaa baaruud ama dhuxul si loogu bogsado.
Guriga xannaanadu ma laha wax caddaynaya.
Pedilanthus waa warshad gudaha ah oo aan caadi ahayn.
Iyada oo daryeel ku habboon, waxay ku kori doontaa oo horumarin doontaa sanad walba.. Warshad qaangaar ah, sanado badan, qeybta hoose ee caleemaha ayaa lumisa saamaynteeda qurxinta sababtoo ah soo-gaadhista.
Daryeelka Pedilanthus guriga:
Pedilanthus waxay leedahay difaac adag oo wanaagsan.si looga ilaaliyo cayayaanka iyo cudurrada. Dhibaatooyinka waxaa lagu dhalin karaa daryeel aan habooneyn.
Dhibaato caadi ah waa xididka kalluunka (cudurka fungal). Ku xiran tahay wax aan habooneyn, waraabin xad dhaaf ah. Cudurku waa mid cakiran.
Haddii aan la ogaan waqtiga, waxay keeni kartaa dhimasho. Ubax wuxuu ubaahan yahay in la gooyo, ka hor inta aan la dhaqin xididdada kallana, ka saar qaybaha waxyeellada leh iyo geeddi-socodka xalka daciifka ah ee kaneecada.
Carruurta cusub iyo awooda kahor intaan la beeriin ayaa lagula talinayaa in la nadiifiyo.
Haddii dhirta ay ku jirto qol kulul oo leh hawo qalalan oo badan, waxaa lagu weerari karaa caarada caarada, aphid. Si aad uga takhalusto cayayaanka ayaa kaa caawin doonta daaweynta biyo qoyan ama xashiishad.
Marka laga adkaado whitefly caleemaha waxay bilaabaan inay huruud noqdaan oo u dhegaan maqaarka gacmaha marka la taabto. Daaweynta sunta cayayaanka ayaa aad uga waxtar leh cayayaanku.
Marka laga adkaado mealyworm ee axils caleen iyo on afkoda, flff-sida flff muuqan, geedka joojinayaan sii kordhaya. Waxaa looga baahan yahay in laga saaro cayayaan suufka.
Fikrado xusuusta ah:
Haddii Pedilanthus waxay caleemo saartaa waxaa laga yaabaa inaad ku hayso xaalad qabow, xaalado qallafsan. Ka taxadar xaaladda gobolka ee afkoda.
Qaboojiyey, qaybaha dhintay waa in la gooyaa. Meeshoodii waxaa jiri doona caleemo cusub.
Haddii xilliga dayrta ama jiilaalka bilaawdo jiid jabkaWaxaad ubaahan tahay inaad hoos u dhigto heerkulka hawada ee qolka, kaliya fiiro nalalka.
Waxaa macquul ah in ubax u baahan yahay iftiin badan.
Haddii ubax ma aysan ubaxin, fiiro gaar ah u leh daryeelka ee xilliga nasashada.
Jaale iyo qalajinta caleemaha Xilliga xagaaga waxay muujinayaan biyo la'aan.
Ha ku dhaafin dheriga dariishadaha aan lahayn mugdi kulul, si looga hortago kulaylka, gubashada.
Faa'iidooyinka iyo dhaawaca pedilanthus:
Pedilithus titimatidny inta badan loo isticmaalo daawada si loo soo saaro walxaha antimicrobial. Dadka deggan Koonfur Ameerika waxay u isticmaalaan daroogada cilminafsiga.
Dhammaan qaybaha dhirta waa sun.. Markaad taabatid waxaad u baahan tahay inaad taxadarto, isticmaal gacmo gashi.
Casiirku waa sun ama kaar marka uu taabto maqaarka gacmaha ama indhaha.. Ubax ka fog carruurta iyo xayawaanka rabaayadda ah.